Accueil > Gazetin'ny nosy > Asa fampandrosoana : Henjana avokoa ireo vehivavy voatendry
Asa fampandrosoana : Henjana avokoa ireo vehivavy voatendry
Tsy napetapetaka fahatany ny anaran’ny zanaka teo amin’ny Ntaolo malagasy taloha. Voatendry omaly tao anatin’ny fivorian’ny filan-kevitry ny minisitra ireto vehivavy efatra ireto : Ramatoa Ratsivalaka Michèle , Bango Andriamasinoro, Anne Muriel Rahaingonjatovo, Mercedes Ratsirahonana. Samy manana ny hanitra ho azy raha ny traikefany sy ny famakiana ny anaran’izy ireo. Tonga dia vantanina ny resaka izay inoana fa hanahaka ny anarany ny asa miandry azy ireo. Dia tsy ho valaka eny am-pandehanana mandrapahatapitry ny fepotoam-piasan’ny filohampirenena hatramin’ny 2023. Hatao bango tokana ihany koa ny mety ho zava-bitany mba hahanteraka an-tsakany sy an-davany ny velirano izay napetraky ny filoha. Hita taratra fa hirimorimo hanaraka ny baikon’ny filohampirenena hatrany fa tsy ho haingon-dapa fotsiny ary tsy voabaikon’ny fehim-pihavanana misy. Voafehy araka izany ny asa mivaingana ary hisongadina araka ny fahafantarana ireo andraikitra efa nosahaniny mialoha izao fanendrena azy efatra mirahavavy mianaka ireto.
Koa inoana fa hitondra fampivoarana lehibe isan-tsehatra eto amin’ny firenena ny lanjan’ny mira lenta nasongadin’ny filoha.
Handroso araka izany ny fifandraisana ara-kolontsaina sy ara-piaraha-monina, hetsiky ny fiadidiana ny Repoblika, ny fandrindrana ny tetik’asan’ny filohampirenena sy ny fiara-miasa eo amin’ny sehatra ara-toekarena.
Hamirapiratra toy ny fandravahana ny hazo krismasy izay efa manakaiky ny fotoam-pankalazana izany ny lapan’Ambohitsirohitra sy Iavoloha. Ho fitaratra azo itarafana ny fampandrosoana mivaingana isan-tokantrano aty Afrika I Madagasikara. Enga anie ka tsy hitranga intsony manomboka eto ireo hoditr’akondro nomena ny filohampirenena nandritra izay roa taona sy tapany nitondrany izay na teo amin’ny ny ara-kolontsaina na ny ara-toekarena na ireo ara-tetik’asa araka ny velirano.